ICervantes Virtual, eyona webhusayithi ibaluleke kakhulu kufundisiso lweSpanishi. | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Imbali yoncwadi, Ilizwe ledijithali, Izaziso, Ezahlukeneyo
Isotype yeThala leeNcwadi leCervantes eyiyo.
Ithala leencwadi laseMiguel de Cervantes yindawo yewebhu yemvelaphi yaseSpain eqokelela imibhalo kuluntu lwaseSpanishi. Ukongeza, ineelayibrari ezincinci, eziqhutywa zizifundiswa ezivela kwihlabathi liphela. Umlawuli wangoku wethala leencwadi ngumbhali UMario Vargas Llosa.
Inkonzo enikezelwa yiCervantes Virtual igqityiwe, ukusukela ibonelela ngemisebenzi emininzi kwifomathi yePDF enokukhutshelwa kwaye ifundwe kuso nasiphi na isixhobo. Kwelinye icala, iphepha linedilesi ye-imeyile apho ungathumela khona imibuzo okanye iingcebiso.
1 Imvelaphi yeCervantes Virtual
2 Imixholo yeCervantes Virtual
2.1 Ikhathalogu yokufikelela simahla
2.1.1 IThala leeNcwadi laseSpain
2.1.2 ILayibrari yaseMelika
2.1.3 Ivenkile yeencwadi yaseAfrika
2.1.4 Sayina ilayibrari
2.1.5 Ivenkile yeencwadi yabantwana nolutsha
2.1.6 Ithala leencwadi lolwimi lwaseSpain
3 Ukwamkelwa okuvela kwiCervantes Virtual
Imvelaphi yeCervantes Virtual
IYunivesithi yaseAlicante yenze le projekthi ekupheleni kwekhulu lama-1999, ngo-XNUMX, ngenkxaso yemali yeMarcelino Botín Foundation kunye neBhanki yaseSpain iSantander. Umbono waqala ukudibanisa unyaka ngaphambi kokusekwa kwawo, ngelo xesha waboniswa njengendawo yencwadi ekwi-Intanethi.
UAndrés Pedreño Muñoz ngumntu owayeyila le ndawo yenkcubeko, Ukuthatha ithuba lokuba ngalo mhla usebenze njengomphathi weYunivesithi yaseAlicante. Inkuthazo yayo yavela kwezinye iiprojekthi esele zikho, ezinje nge: iiyunivesithi ezininzi e-United States sele zisungule iilayibrari zazo zedijithali.
U-Mario Vargas Llosa, umlawuli wangoku weCervantes Virtual.
I-intanethi yayiyindlela entsha yokugcina iirekhodi ngexesha lokusekwa kwe-Biblioteca Cervantes. Eyona njongo iphambili yabadali bale portal yayikukukhulisa inkcubeko yaseSpainUkwenza kwinethiwekhi eyayifikeleleka kwihlabathi liphela yayiyeyona ndlela ilungileyo kwaye kwesi sizathu ikwazile ukuba yindawo yedijithali egcwele ulwazi oluxabisekileyo.
Imixholo yeCervantes Virtual
Nangona iMiguel de Cervantes eyiThala leeNcwadi ebonakalayo inemisebenzi yokubhala, ikwabonelela ngezixhobo zokumamela. Eli phepha libonelela ngolwazi, imikhondo, amaphephancwadi okanye amanqaku ephephandaba, kunye nezifundo zesayensi. Ngokusisiseko le venkile yindlela ebanzi yophando kunye nemfundo yabantu abancinci kunye nabantu abadala, yenye yezona zibalaseleyo iilayibrari ezibonakalayo esinokundwendwela zona.
Iingcali ezikhethekileyo kwi-IT kunye neelwimi zijongene nokubhala, ukuhlela nokupapasha umxholo ifunyenwe kwiiVirtual Cervantes. Ukongeza, le portal ineempapasho kwinethiwekhi yoluntu ezinje nge-Facebook kunye ne-YouTube, ezenza ukuba ulwazi lube nokufikelela ngakumbi.
Ithala lencwadi livule imimandla ethile efana ne-Entretelibros, apho inani elithile lemisebenzi licacisiwe kubasebenzisi, kunye ne-Barter apho iindwendwe zitshintshiselana ngeencwadi okanye ulwazi olufumanekayo. La macandelo abe sisiphumo sokubaluleka okunikwa yiCervantes Virtual kubantu abafundiswe ngezixhobo zayo.
Ikhathalogu yokufikelela simahla
Le portal yewebhu Isasazwa ngamacandelo okanye iindawo, ezahlula imixholo eyahlukeneyo ukuba iiCervantes Virtual zibonelela. Indlela yokufikelela kolu lwazi ilula, ngokusebenzisa injini yokukhangela nawuphi na umsebenzisi angabhala umxholo okanye umbhali abamfunayo.
Esi sixhobo sokubuza isebenza ngezihluzi, ezahlula ababhali, izihloko kunye nezifundo ezikhoyo kwithala leencwadi. Nangona kunjalo, kukho indlela yokufezekisa iziphumo ezithile, umzekelo: umbhali udibene kunye nohlobo lomsebenzi okanye uhlobo.
Ujongano lokukhangela kwiiCervantes ezilungileyo.
IThala leeNcwadi laseSpain
Kweli candelo uza kufumana amanqaku malunga nembali yelo lizwe kunye nezinye izizwe ezingabemi baseMelika baseMelika. Kukho amabali malunga namaqhawe, kunye necandelo lolwimi lwesiCastilian kunye nophando olunxulumene nalo.
Igalari yeli candelo ichotshelwe nguRubio Cremadesun, ugqirha weDyunivesithi yaseAlicante. Ngaphakathi komxholo wale portal ligalari epheleleyo malunga nombhali uMiguel de Cervantes Saavedra, egxininisa ngobomi bakhe, imibhalo kunye negalelo kuncwadi
Inkcubeko yamazwe aseMelika ikhona kuyo yonke imisebenzi enikezelwa leli candelo, ayilulo ulwimi lwaseSpanish kuphela oluphambili. Nangona uninzi lwezibhalo lubhalwe kolu lwimi, kukho amabali esiPhuthukezi kunye nolwimi lwemveli olufana nesiQuechua nesiMapudungun.
Ithala leencwadi laseMiguel de Cervantes unoluhlu olubanzi lwemisebenzi yemvelaphi eyahlukeneyo. Amazwe aseLatin America anje ngeArgentina, iVenezuela, iMexico, iChile kunye neBrazil, kunye namaziko afana neColegio de México, iNeruda Letras kunye ne-Academia Argentina de Letras banezivumelwano nale portal.
Ivenkile yeencwadi yaseAfrika
Ngenxa yexabiso lamabali kwiilwimi zaseSpain ezivela kwilizwekazi laseAfrika, icandelo leThala leencwadi laseAfrika leCervantes Virtual liyavela. UJosefina Bueno Alonso ngumlawuli wale portal, ujongene nokwamkela imisebenzi ukuba ipapashwe kwaye igcine ukusebenza kwayo.
Apha kupapashwa uncwadi lweendawo ezinjengeMorocco okanye i-Equatorial Guinea, ngenxa yokuba bevela kumazwe oyiswa yiSpain. Nangona kunjalo, kukho amabali avela kwizizwe ezingathathwanga lelo lizwe, nangona kunjalo, kuba zibhaliwe ngesiCastilian, isiBasque, isiCatalan kunye nesiGalician banendawo kwithala leencwadi.
Kwindawo yenkcubeko kunye nokufunda njengaleyo imelwe yiCervantes Virtual, kubalulekile ukubandakanya abantu abanokukhubazeka kokuva nokubona. Kukho imveliso yeaudiyo nevidiyo ejolise kuzo zonke iimfuno; umzekelo, iincwadi ezimanyelwayo kunye nomxholo ochazwe kwintetho yezandla.
Ngaphakathi kweli candelo leCervantes Virtual kukho iindidi ezinokuthi zikhethwe ziindwendwe. Kwiwebhu Umxholo uyafumaneka ofundisa iigrama ezibonakalayo, ezahlukileyo kunye nolwimi olusisithulu, i-portal ichonga iifayile ngokwamanqanaba enethiwekhi anokujongwa kuwo.
Ivenkile yeencwadi yabantwana nolutsha
Kwithala leencwadi leCervantes kukho umxholo wayo yonke iminyaka kunye neenjongo. Kukho imisebenzi efumanekayo yokubhalwa kweSpanishi kunye neIbero-American, esi sithuba sibonelela uphando kunye nemfundo ngocweyo, ngezinto ezinokumanyelwa, iimagazini, iintsomi kunye neenoveli.
Ithala leencwadi lolwimi lwaseSpain
Esi sithuba sizinikele ngokupheleleyo kufundo lwesiSpanish. Iqaqambisa iimpawu ezinje, umzekelo, ukuba lulwimi oluthethwa ngabantu abamalunga namakhulu amahlanu anamashumi amahlanu ezigidi kwaye lubekwe njengolwesibini ekuthethwa ngalo kakhulu kwihlabathi kwaye okwesithathu kufundwe kakhulu, ukongeza ekubeni lulwimi olusemthethweni yamazwe angama-20.
Kule ndawo yeCervantes Virtual Izichasi, imibhalo kunye nemisebenzi ebenegalelo kuphuhliso lolu lwimi luyafumaneka. Izinto ezipapashiweyo kupelo, igrama, iifom zencoko ezinje ngemibongo kunye ne-rhetoric, kunye nembali yeSpanish uqobo. Esi sithuba sibonisa umdla obanzi wabalawuli bamathala eencwadi ukuba iSpanish isasazwe kwaye ihlonitshwe.
Miguel de Cervantes y Saavedra, eponymous kwiphepha.
Ukwamkelwa okuvela kwiCervantes Virtual
Ngo-2012 iNkosana yaseAsturias yathathela ingqalelo ukuba iMiguel de Cervantes eyiThala lencwadi liyinqaba ebonelela ngegalelo elikhulu kwimanyano yeLatin America neSpain. Ngokuba nenkxaso yeenkampani ezidityanisiweyo kunye namaziko, ukukhula kwayo kuhlala kunjalo kwaye ukuhanjiswa kwenkcubeko yeLatin America kugcinwa.
Ngo-2013 i-portal yaqatshelwa kunye neBhaso leStanford loLungiso kwiiLayibrari zoPhando, Kumgangatho womxholo wayo kunye noyilo. Ukongeza, inerekhodi yokupapashwa okungaphezulu kwama-225.000 kwaye ngo-2017 ikwazile ukufumana ngaphezulu kwe-10 yezigidi ezizodwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » IiCervantes ezifanelekileyo